Ka Samaynta Lacag Ethereum Codsiga Mobilka ee VfxAlert | vfxAlert official blog
Mobile vfxAlert: lacag ka samaynta Ethereum
Ethereum waa cryptocurrency-ka labaad ee ugu weyn marka la sameeyo xaraf-weyn ka dib Bitcoin. Hantidu waxay muujinaysaa isbeddellada xasilloon, isbeddelka iyada oo aan isbeddel degdeg ah lahayn, maqaarka ayaa la isticmaali karaa. Sida had iyo jeer, calaamadaha ikhtiyaarka ikhtiyaariga ah ee ugu fiican waxay muujinayaan tilmaamayaasha farsamada caadiga ah.
Tilmaamaha istiraatijiyad binary :
Nooca : Trend.
Waqti xaddidan : Mid kasta oo ka mid ah inta u dhexeysa M1-M5. Xaaladeena, M1 ayaa loo isticmaalaa, laakiin iyada oo korodhka falanqaynta, saxnaanta calaamaduhu way sii kordhayaan.
Hantida ganacsiga : Hanti kasta oo crypto ah. Shuruudda ugu weyni waa fidsan go'an (2-3 dhibcood) oo aan lahayn kharashyo qarsoon.
Waqtiga ganacsiga : 24 saacadood / 7 maalmood usbuucii.
Boqolkiiba ikhtiyaarka premium n: Aan ka yarayn 70-75%.
Tilmaamayaasha la isticmaalay
Istaraatiijiyadu waxay isticmaashaa laba tilmaame oo farsamo:
Celceliska Dhaqdhaqaaqa Jibbaaran (EMA) oo leh muddo 15 . Tilmaamayaasha isbeddelka kaas oo aan ku go'aamineyno meesha furitaanka ee doorashada. Istaraatiijiyadda binary-ga looguma talagelin ganacsi inta lagu jiro xilliyada fidsan. Waxaan ka baayacmushtareynaa kaliya haddii kala duwanaanshuhu u dhaxeeyo ugu yaraan 15-25 dhibcood!
Boqolkiiba Williams (Williams%R) . Celceliska dhaqdhaqaaqa waa in uu daruuri ku xaqiijiyaa oscillator tusinaya xaalad la iibsan karo marka iibsadayaashu aysan kor u qaadi karin qiimaha, ama ay ka badan yihiin halka aysan ku dhowdahay qof suuqa ku iibinaya qiimo jaban.
Ka dib markii lagu rakibo tusaha binary jaantusyada, waxaanu eegnaa tusaalayaasha calaamadaha: